Buckles T-Type Manufacturers na Suppliers | China buckles T-Type Factory
Igwe anaghị agba nchara clip T-ụdị, eji na ọtụtụ ụdị nke Jera si gbalaga, n'ihi na attaching efefe akara oyiyi akwa na okporo osisi ya. Obi njikọ na ezi n'ibu ike na-enweta site pụrụ iche udi nke ikechi. Na-emekarị ihe ngwọta na-eji na eletriki USB oyiyi akwa, ngwa anya eriri USB na ngwa na-ewu nke n'ezinụlọ ngwa anya na netwọk, na mmiri na ụgbọ okporo ígwè eme njem, na Ngwuputa, mmanụ na gas ụlọ ọrụ, gwara bụrụ na ike akara.
T-ụdị buckles nwere ihe ọkpụrụkpụ nke ihe onwunwe karịa L-ụdị buckles, na-zubere maka ojiji na-elu-erughị ala ike njikọ na njikọ.
Buckles T-ụdị pụtara àgwà site ahịa anyị.
Jera 'anaghị agba nchara buckles dị iche iche nha aka gị strapping mkpa nke ichebe na ibu.
Igwe anaghị agba nchara nkechi HC-10-T
Igwe anaghị agba nchara nkechi HC-16-T
Igwe anaghị agba nchara nkechi HC-13-T